Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro +: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
Usoro ohuru ohuru nke Redmi di ebe a, ma obu Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro + ndị na-eme ya. Ma ọ bụ na ihe atọ a nke arụmọrụ dị elu dị ka ihe dị ka etiti zuru oke, mana ọ bụghị n'ihi njirimara ha na nkọwapụta teknụzụ, mana n'ihi ọnụahịa ha.
Anyị na-eche ihu igwe ihu igwe dị elu dị ọnụ ala atọ, yabụ enwere ọtụtụ atụmanya banyere ihe ịga nke ọma ha ga-eweta na ahịa, ebe ọ bụ na a na-ele ha anya dị ka nro nke oke mobiles dị elu na ọnụ ahịa dị elu, ịbụ otu n'ime nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị. maka 2021 a, n’enweghị mgbagha.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro +
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro +
Maka ndị na-ebido ebido, ma Redmi K40 na ụdị abụọ dị elu ya nwere mpempe akwụkwọ nwere oghere maka igwefoto selfie. Nke a dị na elu etiti ha, na pụtara obere oghere.
Ogwe azụ nke ụdị atọ ahụ nwere naanị modulu igwefoto, yabụ onye na-agụ akara mkpịsị aka adịghị na ndị a, mana ejikọtaghị ya n'okpuru ihuenyo ahụ; kama, ọ na-etinye ya n'akụkụ. N'aka nke ya, o siri ike ịkọwa ọdịiche dị na ha, ebe ọ bụ na ha nwere otu ụdị ahaziri mma.
Anyị ga-amalite ikwu maka Redmi K40, ekwentị mkpanaaka nwere ihu igwe ihu igwe AMOLED nke ruru 6.67 sentimita diagonally. Nke a bụ mkpebi FullHD + ma na-ewepụta ume ọhụrụ nke 120 Hz. Nzaghachi na-emetụ n'ahụ, n'aka nke ọzọ, bụ 360 Hz, nke dị elu karịa ọkọlọtọ, nke na-abụkarị 240 Hz na mobiles dị elu; nke a bara uru karịsịa maka egwuregwu.
Ihe ọzọ bụ na ngebichi ya nwere ncha kacha nke 1.300 nits -nke dị oke elu, ihe dịkwa mma-, asambodo HDR10 +, nke iko Corning Gorilla Glass 5 na-echekwa ya ma nwee ihe mmetụta maka igwefoto selfie 20 MP. .
Igwe mkpanaka nke na-eji ngwaọrụ a arụ ọrụ bụ Snapdragon 870, 7-core 1nm chipset nke nwere nhazi ndị a: 77x Cortex-A3.2 na 3 GHz + 77x Cortex-A2.42 na 4 GHz + 55x Cortex-A1.8 na 650 GHz. Na nke a, anyị ga-agbakwunye Adreno 5 GPU, 6 / 8/12 GB LPDDR3.1 RAM na 128/256 GB UFS 4.520 ohere nchekwa dị n'ime. O nwekwara batrị ikike 33 mAh nke kwekọrọ na ngwa ngwa ngwa ngwa XNUMX W.
N'ihe banyere igwefoto, Redmi K40 na-abịa na modulu atọ nke na-arụ ọrụ na oghere 48 MP bụ isi, oghere MP nke dị elu nke MPNXX nwere oghere nlele nke 8 Celsius, yana onye na-agba telephoto / macro 119 MP. Na mgbakwunye, enwere ọkụ ọkụ LED abụọ maka ọkụ gburugburu ebe gbara ọchịchịrị.
Akụkụ ndị ọzọ gụnyere ọdụ ụgbọ USB Type-C maka igwe na-ebugharị ego, 5G SA na njikọ NSA, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, ihe mmetụta infrared, ndị na-ekwu okwu stereo, Hi-Fi na Dolby Atmos. Sistemụ arụmọrụ ya na-abịa bụ Android 11 na MIUI 12.
Redmi K40 Pro nwere otu ihuenyo dị ka ọkọlọtọ Redmi K40. Enweghị mgbanwe ọ bụla na nha ya, ma obere ihe na teknụzụ panel na ọnụego ume ọhụrụ. N'ihi ya, anyị chọtara ihuenyo 6.67 nke anụ ọhịa ahụ bụ 120 Hz AMOLED nke nwere ọnụego ihe atụ 360 Hz. Anyị hụkwara oghere nwere igwefoto selfie 20 MP. Otu uzo nile.
Mgbe anyị na-ekwu maka arụmọrụ, ọ bara uru ịkọ nke ahụ Ihe nlere a na Snapdragon 870 ma choo maka Snapdragon 888, SoC kacha elu nke Qualcomm. N'aka nke ọzọ, ebe nchekwa RAM bụ 6/8/12 GB, n'otu oge ahụ a na-enye ebe nchekwa dị n'ime dị ka 128/256 GB. Otú ọ dị, batrị ahụ ka bụ otu: 4.520 mAh na 33 W ngwa ngwa.
Igwefoto nke ihe nlereanya a dịkwa okpukpu atọ, na ihe dị iche na onye na-agbapụ agbapụ abụghị 48 MP, mana 64 MP. Ihe mmetụta abụọ ọzọ bụ 8 na 5 MP n'obosara na telephoto / macro sensọ, n'otu n'otu.
Na ndị ọzọ, ihe niile na-anọgide otu.
Redmi K40 Pro + na-ekerịta ọtụtụ myirịta na ekwentị abụọ a kọwaralarị, ebe ọ bụ onye njide nke otu ihuenyo abụọ na otu processor chipset nke Redmi K40 Pro, nke bụ Snapdragon 888.
Nhọrọ maka RAM na ebe nchekwa dị n'ime bụ otu: 12 + 256 GB. Batrị ahụ bụkwa ikike 4.520 mAh na ikikere 33 W na-agba ọsọ ọsọ.
Usoro igwefoto nke ngwaọrụ a kachasị dị elu, dịka ị ga-atụ anya ya, ịbụ onye isi ihe mmetụta nke 108 MP. Ihe abuo ndi ozo (8 MP wide angle na 5 MP telephoto) ka di.
IKIRU 6.67-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi FullHD + na 120 Hz na-enye ume ọhụrụ / 360 Hz metụrụ ọnụego ọnụego / 1.300 nits max. 6.67-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi FullHD + na 120 Hz na-enye ume ọhụrụ / 360 Hz metụrụ ọnụego ọnụego / 1.300 nits max. 6.67-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi FullHD + na 120 Hz na-enye ume ọhụrụ / 360 Hz metụrụ ọnụego ọnụego / 1.300 nits max.
Nhazi Snapdragon 870 Snapdragon 888 Snapdragon 888
Meme ncheta 128/256GB UFS 3.1 128/256GB UFS 3.1 256 GB nke UFS 3.1
Gbanwee CAMERA Nke atọ: 48 + 8 + 5 MP Nke atọ: 64 + 8 + 5 MP Nke atọ: 108 + 8 + 5 MP
CAMERA N'IHU 20 MP 20 MP 20 MP
UMUAKA 4.520 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 4.520 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 4.520 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na MIUI 12 Gam akporo 11 na MIUI 12 Gam akporo 11 na MIUI 12
Atụmatụ ndị ọzọ 5G SA na NSA / USB-C n'ọdụ ụgbọ mmiri / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / Akụkụ ugwu akara mkpisiaka agụ / NFC / Stereo ọkà okwu / HDR10 + / Dolby Atmos na Hi-Fi / Infrared sensor 5G SA na NSA / USB-C n'ọdụ ụgbọ mmiri / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.1 / Akụkụ-ugwu akara mkpisiaka agụ / NFC / Steere okwu / HDR10 + / Dolby Atmos na Hi-Fi / Infrared sensor 5G SA na NSA / USB-C n'ọdụ ụgbọ mmiri / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.1 / Akụkụ-ugwu akara mkpisiaka agụ / NFC / Steere okwu / HDR10 + / Dolby Atmos na Hi-Fi / Infrared sensor
Ekwentị niile etinyela ma rụọ ọrụ na China, yabụ adịlarị ire ere ebe ahụ. Amabeghị mgbe a ga-ahapụ ha na Europe na ụwa ndị ọzọ, mana nke ahụ ga-eme n'ezie. Ọnụahịa ha bụ ndị a:
40/6 GB Redmi K128: 1,999 yuan (euro 254 na mgbanwe ahụ)
40/8 GB Redmi K128: 2,199 yuan (280 euro na ọnụego mgbanwe)
40/8 GB Redmi K256: 2,499 yuan (318 euro na ọnụego mgbanwe)
40/12 GB Redmi K256: 2,699 yuan (343 euro na ọnụego mgbanwe)
40/6 GB Redmi K128 Pro: 2,799 yuan (356 euro na ọnụego mgbanwe)
40/8 GB Redmi K128 Pro: 2,999 yuan (381 euro na ọnụego mgbanwe)
40/8 GB Redmi K256 Pro: 3,299 yuan (420 euro na ọnụego mgbanwe)
Redmi K40 Pro + 12/256 GB: 3,699 yuan (470 euro na ọnụego mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro +, atọ dị oke ọnụ ala dị elu na-eji 120 Hz enyo